Lehilahy te-ho an'ny Shinoa milionera vehivavy tokan-tena - Telegraph
Lehilahy te-ho an’ny Shinoa milionera vehivavy tokan-tena — Telegraph
Johnny Du, ny TALE jeneralin’ny online dating start-up Tanoan (tiako Ny Lehilahy iray ny olona), no nanomboka ny-eny ny fikatsahana tamin’ny volana lasa teo ary mikendry ny mahita vady sahaza ho an’ny sasany ny ankamaroan’ny vehivavy afaka ao amin’i Shina maoderina. Ny vehivavy dia ahitana ny tena toetrany magnates sy ny orinasa mpamokatra entana tycoons avy amin’ny faritanin’i Sichuan, izay efa tsy afaka mahita Atoa Marina aza, na angamba satria, ny ballooning banky-mizana. Mino aho fa ity no fotoana voalohany mba efa nisy toy izany ny tetika hany mifanaraka ho an’ny mpanan-karena ny vehivavy, Andriamatoa Du nilaza Ny Isan’andro Telegraph tamin’ity herinandro ity nandritra ny fitsidihana Shanghai, iray amin’ireo tanàn-dehibe izy no tapping ny mety ho vadiny. Mampiaraka dia raharaham-barotra lehibe any Shina, firenena izay reputedly an-trano ny sasany tapitrisa-iray ny olona. Tany ampiandohan’ity taona ity mpanorina ny iray amin’ireo Shina lehibe indrindra an-tserasera mampiaraka toerana x Baize x nilaza tamin’ny fahitalavitra ao an-toerana ny orinasa dia manao isan-taona ny tombom-barotra ny manodidina £ tapitrisa avy ny tapitrisa mpampiasa voasoratra. Fa amin’ny firenena malaza ho an’ny miavaka amin’ny lahy sy ny vavy-tsy fifandanjan’ny izay efa nanameloka an-tapitrisany ny lehilahy tokan-tena-ny fiainana, indrindra matchmaking sampan-draharaha mifantoka amin’ny fanamafisana ny fitiavana fiainan’ireo lehilahy Sinoa. Na dia ny governemanta mahita ny manampy ny olona hahita ny fitiavana araka ny laharam-pahamehana. Tamin’ny volana lasa ny Vahoaka gazety mpivoaka Isan’andro dia nampitandrina fa ny firindrana ara-tsosialy sy ny fahamarinan-toerana mety ho nandrahona raha toa ka an-tapitrisany ny olona any ambanivohitra no tsy afaka ny hahita mpiara-miombon’antoka. Fa Shina super-manan-karena ny vehivavy no misedra olana ireo ihany, hoy Atoa Du tsy ny kely indrindra dia ny mahita ny fotoana ny skoto ho vadiny. Izy ireo no tena be asa, mazava ho azy, noho izany izy ireo dia tsy manana fotoana betsaka mba hitsena ny tsara daty. Izy ireo foana voahodidina raharaham-barotra ny olona, na mpanjifa, ka tsy manana be dia be ny fahafahana mivory tsara ry zalahy any ivelany avy hatrany ny faribolana. Nanan-karena ny olona dia tsy voatery te vadiny tahaka mahomby toy ny azy ireo. Te-vady tsara sy ny tsara reny, fa tsy voatery te vehivavy mahomby izy ireo, satria mihevitra izy dia mandany fotoana betsaka tamin’ny raharaham-barotra, fa tsy ny fianakaviana. Mandritra izany fotoana izany ny vehivavy mpanankarena manana avo ny faneva eo amin’ny fisafidianana ny vadiny. Satria izy ireo no tena mahomby, izy ireo ihany koa dia manantena ny vadiny, fara fahakeliny, raha mahomby izy ireo. Rebecca Chen, izay ao amin’ny iray amin’ireo tanora indrindra Chengdu ara-bola ny sonia ho an’ny ny tetikasa, hoy ny fenitra ara-tsosialy ihany koa mijaly sy mananosarotra ery ny manan-karena vehivavy mitady ny tonga lafatra ny olona. Ny olona efa ambony be ny tahan’ny fahombiazana eo amin’ny fitadiavana ny fitiavana sy be midadasika fifantenana, satria izy ireo dia afaka misafidy olona iray avy amin’ny ambany ny vondrona ara-tsosialy, hoy i Chen, izay fianakaviana fanaraha-maso ny Chengdu fananana sy ny trano fandraisam-bahiny fanjakana. Ho an’ny vehivavy, izany dia efa azo atao ny misafidy downwards x ny fianakaviana sy ny namana dia tsy hanaiky, ary izy ireo no hiatrika zava-tsarotra maro. Andriamatoa Du mihaza ho afaka bachelors, ny fiaraha-miasa amin’ny Hong Kong-monina ny fiarahana amin’ny sampan-draharaha Feng Huang Qi, nanomboka tamin’ny volana jiona, rehefa nanomboka naka an-tserasera fampiharana avy manerana an’i Shina sy manerana izao tontolo izao. Hatreto dia manodidina, ny lehilahy efa nanao sonia, anisan’izany ny iray Aostraliana sy ny maro mpangataka avy any ETAZONIA sy Kanada. UK-monina nahazo diplaoma malaza Britanika ny anjerimanontolo ihany koa ampiharina, hoy izy. Dingana roa ny fikarohana dia hanomboka amin’ny volana jolay raha mpikarakara manomboka rehefa nikaroka CVs sy vetting ho vadiny amin’ny andian-mifanatri-tava fivoriana amin’ny fifandraisana manam-pahaizana manokana sy ny faminaniana ny ho mpilaza ny hoavy ao amin’ny trano fandraisam-bahiny manodidina an’i Shina. Ny nofantenana ny olona dia ho asaina amin’ny rehetra-ny fandaniana-karama nankany Chengdu tamin’ny aogositra, Shina Valentines x Andro, ho an’ny sakafo hariva daty amin’ny ny vehivavy, taona eo ary. Fifaninanana ho an’ny toerana iray eo amin’ny latabatra dia ho masiaka be. Mpiadina dia tsy maintsy manana, fara fahakeliny, fitsipika hoe ny fianarana sy ny ho toy izany koa ny taona no ho miakatra noho ny fitiavana-ny mosary-bola. Tsy mitady tomboys, hoy Atoa Du, izay sady mihazona ny mari-pahaizana maîtrise tao injeniera ao amin’ny Anjerimanontolon’i Minnesota, fa hoy izy no sambatra am-panambadiana tamin’ny zanany roa. Mitady ry zalahy izay tena matotra, dia ny fahatakaran-javatra sy ny tena manohana, amin’ny vazivazy sy ny tsara tsiro, ary izay mahay mankafy ny fiainana sy ny manao ny marina. Ny tsiro Mahjong x nentim-paharazana Shinoa filokana lalao x koa dia tsara, hoy izy nanampy.
Izany dia ampahany amin’ny fiainana andavanandro. RAMATOA Chen, izay teraka tao Urumqi, ao lavitra-andrefan’i Shina, hoy ny tonga lafatra ny olona ilaina mety hampahasosotra, malala-tanana, matanjaka, ary ny fifampiresahana.
Dia ilaina ihany koa ny vola
Dia tokony manana ny tanjany ara-toekarena, farafahakeliny tapitrisa yuan tamin’ny fananany, satria namako rehetra efa be vola na mihoatra, ary ny tena harena dia taratry ny fampidirana ny fahaizany. Dia mila manana tsara fitondran-tena sy ny fomba fiaina ara-pahasalamana. Mpiadina ihany koa dia tokony ho vonona ny hifindra any Chengdu, mitombo haingana ny tanàna manodidina, kilaometatra andrefan’i Shanghai, malaza noho ny pandà, mirehitra sakafo sy ny fitaterana an’habakabaka sy fiara fanamboarana ny indostria. Ho an’ny olona mitady milionera hiantso ny tenany, Chengdu, an-trano efa ho tapitrisa ny olona, dia tsy ho ratsy toerana manomboka. Ny faritra efa za-draharaha breakneck fitomboana ara-toekarena nanomboka ny Beijing dia nanomboka ny Any Andrefana fiara mba hampitombo Shina anatiny ao.
Tamin’ny taon-dasa Chengdu toe-karena lehibe
isan-jato raha ny tanàna ny Taonjato Vaovao Global Centre, ara-barotra sy ny fialam-boly sarotra fa dia reputedly ho izao tontolo izao lehibe indrindra mijoro irery trano, dia napetraka mba hanokatra taty aoriana amin’ity taona ity. Ny ranomasina Mediteranea-themed sarotra dia voalaza fa mirehareha roa lafo vidy, -efitra fandraisam-bahiny, hot springs, an-dranomasina valan-javaboary sy ny tora-pasika artifisialy. Araka ny manan-karena-ny lisitry nangonin’ny Shanghai-monina mihaja mpitory Heron, ny Sina manan-karena indrindra, ny olona dia mifototra amin’ny faritanin’i Sichuan raha miaina ao amin’ny renivohitra Chengdu. Faritanin’i Sichuan manana taha ambony indrindra amin’ny isan’ny olona ankoatra ny Sina manan-karena indrindra. Taorian’ny fanavaozana ara-toekarena tao Shina dia maro ny olona any Sichuan lasa tena manan-karena, samy lehilahy sy ny vehivavy, Andriamatoa Du nanipika. Ary koa, Sichuan ankizivavy dia malaza ho tsara tarehy ary koa ny manan-tsaina, miasa mafy sy ny manan-tsaina
← Vehivavy shinoa: Hihaona Mafana Vehivavy Shinoa ao amin'ny Olona Tokana Travel
Ny Fomba Tsara indrindra mba Hihaona rosiana ny Tovovavy ho an'ny Fanambadiana →